युबति चाहिएमा कमेन्टमा Hello लेखेर भित्र गएर सम्पर्क गर्नुहोस।[सम्पर्क नम्बरसहित ] - Mitho Khabar
युबति चाहिएमा कमेन्टमा Hello लेखेर भित्र गएर सम्पर्क गर्नुहोस।[सम्पर्क नम्बरसहित ]
June 25, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on युबति चाहिएमा कमेन्टमा Hello लेखेर भित्र गएर सम्पर्क गर्नुहोस।[सम्पर्क नम्बरसहित ]
यु’वतीहरुलाई आफू नुहाउदै गर्दा पनि विभिन्न खालको चिन्ताले सताउने एउटा अ’ध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरुले नुहाउदा आफ्नो शरीर र कपालको बारेमा चिन्ता गर्छन् । यस बाहेक उनीहरु बाथरुमभित्र आफैसँग छिल्लिने गरेको समेत अ’ध्ययनले पत्ता लगाएको छ । केटीहरू अक्सर स’म्बन्धबारे चिन्तित रहन्छन् । उनीहरू सधैं दिगो स’म्बन्धको खोजीमा हुन्छन् ।
त्यसैले उनीहरू अक्सर हाम्रो स’म्बन्ध कत्तिको टिकाउ हुनेछ रु के हामी सधैं यस्तै गरेर खुसी रहन सकौंला रु आदि सोचमा हराउने गर्दछन् ।केटीहरू आफ्नो कपालबारे पनि चिन्ता गर्ने गर्दछन् । नुहाउँदा केही कपाल झर्नु सा’मान्य कुरा हो तर केटीहरू भने यसबारे केही बढी नै ग’म्भीर भइदिने गर्दछन् । त्यति मात्र होइन उनीहरू नुहाउँदा विभिन्न हेय’रस्टाइल कस्तो लाग्दो रहेछ भनेर ऐनामा समेत हेर्ने गर्दछन् ।
नुहाउँदा केटीहरू चिन्तित हुने अर्को विषय हो मोटोपना । अक्सर केटीहरू बाथरूमभित्र आफ्नो न’ग्न शरीर हेरेर आफ्नो फिगरबारे चिन्तित हुने गर्दछिन् । उनीहरूलाई त्यसबेला आफू मोटी भएको र अब शा’रीरिक व्यायाम थाल्नुपर्ने लाग्ने गर्दछ । केटीहरूले बाथरूममा आफ्नो प्रे’मीको क’ल्पना समेत गर्ने गरेको बु’झिएको छ ।
त्यति मात्र होइन प्रेमी भएका केटीहरूआफ्नो प्रेमीबारे सोचेर लजाउने उसले गरेका प्र’शंसाहरू सोचेर खुसी समेत गरेको थाहा हुन आएको छ । केटीहरूले नुहाउँदा आफ्नो फिगर, सु’न्दरताबारे त चिन्तित हुन्छन नै त्यसका साथै उनीहरूलाई आफूले नुहाउँदा धेरै समय लगाएको र मानिसहरूले के भन्लान् भनेर समेत चि’न्तित हुने गर्दछन् ।
नुहाउने क्रममा हामी प्राय गल्ति गरिरहेका हुन्छौं जसले हाम्रो स्किन तथा कपाल को स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर गरेको हुन्छ । अनुहारको छाला निकै से’न्सेटिभ हुने गर्छ । फोर्सले आएको पानी, अति तातो वा अति चिसो पानीले अनुहार वा आँखालाई हानी पुर्याउँछ । अति तातो वा चिसो पानीले अनुहारको छाला र आँखालाई मात्र नभई कपालको टिस्युजलाई हानी पुर्याउँछ ।
जसले कपाल झर्ने समस्या आउन सक्छ । साथै कपालको जरामा समेत असर पुगी बाक्लो कपाल पातलिने हुन्छ । अनुहारको छालामा पनि यसको असर यति पर्छ कि जसको कारण छालाको शक्ति शु’न्य हुन सक्छ यसै कारण छाला सुक्खा हुन्छ । धेरै समय पानीसँग खेल्नु हुन्न । यसले छालाको म्वा’इस्चर कम गर्छ जसको कारण छाला ड्राई बन्छ ।
यसै कारण चिल्लो छाला पनि सुक्खा बन्छ । जाडोको समयमा झैँ छाला फुट्ने स’मस्या हुन सक्छ । नुहाएपछी पुछ्ने तौलिया वा बडी स्क्रभर हामीले बाथरुममै राख्ने गर्नु हुन्न । कतिपय ट्वाइलेटसमेत भएको एटेच बाथरुममा झन् यस्तो तौलिया राख्नै हुन्न । यस्तो अ’वस्थामा नुहाएपछी सरिर पुछ्ने तौलियामा बिभिन्न ब्या’क्टेरिया हुन सक्छन् । जसले हाम्रो छालामा बिभिन्न स’मस्या आउन सक्छन ।एजेन्सी
बिवाह पक्का भएपछि पत्रकार महेशले तोके हनिमुन मनाउने ठाउँ , कहाँ जादैछ्न हनिमुन मनाउन?
एकाएक यसरी सडकमै ट्राफिक प्रहरी छम-छमी नाचेपछि?
विराजलाई दर्शकले बाघ भन्दै कराउँदा बिराज खुशी निकिताले डरा,उदै यसो भनिन(भिडियो हेर्नुहोस )
एका बिहानै १५ सय किलो शुद्ध सुनबाट बनेको महालक्ष्मी मन्दिरको दर्शन गरि सुत्नुहोला !